ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွှတ်တော်ကို စွန့်ခွာသင့်ပြီ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွှတ်တော်ကို စွန့်ခွာသင့်ပြီ
(http://www.phophtawnews.org/burmese/ မှ မူရင်းသတ်ပုံအတိုင်း PDF ဖိုင် ပြုလုပ်၍ တင်ဆက်ပါသည်)
U Aung Htoo's Article _5!8!2013 by ko latt
Real Thakhin said...
One should wait until 2005 election and its outcome. if it is held free and fair, and NLD wins byamajority, DASSK will have better leverage on political reforms (even if she's not allowed to become president). Only afteramajority win, NLD can legally say that it hasareal political legitimacy. Painting excessive negative colors on NLD and DASSK will not help.
စာရေးသူဦးအောင်ထူး(ရှေ့နေ)ဟာ..ဝတ်လုံတော်ရ (ဂဠုန် အောင်ထူး)ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေသူဘဲဖြစ်ရ
*** မှန်လိုက်တဲ့ဆောင်းပါးဗျာ ၊
ယနေ.ပြည်သူတွေရဲ. ခံစားချက်အတိုင်းပါဘဲ ။
*** DASSK အနေနဲ.ကလည်း ခက်ခဲလှတဲ. နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်မှာ ရရှိရမယ်. အဆင်.တဆင်.ရောက်အောင် လက်ရှိစစ်အာဏာရှင်
တွေကို သင်.အောင်ပေါင်းနေရ ပုံပါ ။
.. ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ခြေ (Possibility) နဲ.
တိုင်းပြည်နဲ. ပြည်သူတွေ ပေးဆပ် ရတာတွေက
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ၊ သတိထားရလိမ်.မယ် ။
ရေးထားတာလေးတွေ က သတိပြုစရာပါ ။
U Aung Htoo not fighting DASSK.He gave good suggestings for her.